उमेर बढेसँगै शरीरको आकारमा किन आउँछ परिवर्तन ?
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यउमेर बढेसँगै शरीरको आकारमा किन आउँछ परिवर्तन ?
विराटनगर/उमेर बढेसँगै शरीरको आकारमा स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन हुँदै जान्छ । शरीरको आकारमा हुने परिवर्तनलाई रोक्न सकिँदैन, तर जीवनशैलीमा ल्याएको सकारात्मक–नकारात्मक परिवर्तनले प्रक्रिया ढिलो वा चाँडो हुन सक्छ । मानव शरीर बोसो, टिस्यु (मांसपेशी र अंग), हड्डीहरू र पानीबाट बनेको हुन्छ । ३० वर्षपछि, व्यक्तिले विस्तारै शरीरका टिस्यु गुमाउन थाल्छ ।
शरीरको मांसपेशी, कलेजो, मृर्गौला र अन्य अङ्गहरूमा भएको केही कोष पनि हराउन सक्छन् । मांसपेशी गुमाउने यो प्रक्रियालाई एट्रोफी भनिन्छ । हड्डीमा हुने केही खनिज र हड्डीको घनत्व पनि कम हुँदै जान सक्छ (यस प्रक्रियालाई सुरुवातको चरणमा ओस्टोपिनिया भनिन्छ र पछिल्लो चरणमा आस्टियोपोरोसिस) । टिस्यु हराउँदा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ ।
३० वर्षपछि शरीरमा हुने फ्याटको मात्रा स्थिर रूपमा बढ्न थाल्छ । कम उमेर हँुदाको तुलनामा बूढो हुँदा शरीरमा कम्तिमा एक तिहाइ बढी फ्याट जम्मा भइसकेको हुनसक्छ । आन्तरिक अङ्ग वरिपरिसहित शरीरको बीचतर्फ फ्याट टिस्यु निर्माण भए पनि छालामुनि फ्याटको लेयर सानो हुन्छ ।
उमेर बढ्दै जाँदा उचाइ कम हुनु हड्डी, मांसपेशीहरू र जोर्नीहरूमा हुने परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
मान्छेले सामान्यतया ४० वर्षपछि प्रत्येक १० वर्षमा करिब आधा इन्च गुमाउँछ । ७० वर्षपछि उचाइ कम हुने प्रक्रिया छिटो हुन्छ । उमेर बढेसँगै एकदेखि तीन इन्च उचाइ कम हुनसक्छ । उमेर बढेसँगै खुट्टाको मांसपेशी कम हुने र जोर्नी कडा भएसँगै हिँड्न कठिनाइ हुनथाल्छ ।
शरीरको अत्यधिक बोसो र शरीरको आकारमा परिवर्तनले सन्तुलनलाई असर गर्न सक्छ । उमेर बढेसँगै शरीरको तौलमा हुने परिवर्तन पुरुष र महिलाका लागि फरक हुन्छ । पुरुषमा प्रायः ५५ वर्षसम्म तौल बढ्छ र पछि तौल कम हुन थाल्छ । यो पुरुषमा सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोनको मात्रा कम हुनेसँग सम्बन्धित छ । महिला सामान्यतया ६५ वर्षसम्म तौल प्राप्त गर्छन् र त्यसपछि तौल कम हुन सुरु हुन्छ ।
स्वस्थ आहार अनुशरण गरेर, शारीरिक रूपमा सक्रिय रहेर र सकारात्मक जीवनशैली अपनाएर तौलमा हुने परिवर्तनलाई प्रक्रियालाई कम गर्न सकिन्छ ।